I-Finches Cottage, eLimpinwood Gardenstay - I-Airbnb
I-Finches Cottage, eLimpinwood Gardenstay
Limpinwood, New South Wales, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sharon
'Finches Cottage' e-Limpinwood Garden Stay.
Igumbi lokulala elizimele elingu-2 'Country Cottage' elakhiwe kumahektha ayi-12 eLimpinwood Valley enhle, eTweed, abekho omakhelwane.
Iseceleni & enokuthula, ukubukwa omangalisayo, izithombe ipharadesi, fossicking.
Ukufinyelela e-Limpinwood Gardens Nursery lapho ababungazi bakho behlala khona eduze nje, amathrekhi ahamba ku-70acres, amahektha ezingadi, izingadi ze-Camellias ezimbalini kusukela ngoMeyi kuya ku-Agasti. Izinyoni zomdabu ziningi, ama-wallabies anama-joeys esikhwameni adla eduze kwe-cottag
'Finches Cottage' - Setha kumahektha ayi-12 phakathi kwezingadi ezinhle. Abekho omakhelwane abaseduze, yindlu encane kuphela esizeni. Finyelela kubanikazi bamahektare angama-80 eduze, ngenkulisa, izingadi ezibanzi, umfudlana, i-spa emfudlaneni, uhamba uzungeza indawo.
- Bekuyimfihlo futhi Kunokuthula
- Ukubukwa okumangalisayo kwe-Macpherson Ranges
- Abathwebuli bezithombe baphupha izinyoni, izimbali nokubukwa kwe-panoramic, ama-wallabies nezilwane zasendle
- I-Rock fossick ku-'Finches Creek' ebhibhayo endaweni
- Hamba ngeLimpinwood Gardens Botanic Gardens
- Imingcele yefa lomhlaba iLimpinwood Nature Reserve
- I-Cozy Comfortable Country Cottage enawo wonke ama-mod cons
- Ikhishi elivulekile lesimanjemanje / indawo yokudlela / indawo yokuphumula
- Ifakwe umoya ngokugcwele, ikhishi eligcwele
- Ukulala 4 - Umbhede we-Queen ekamelweni elilodwa - umbhede we-trundle okwesibili
- Iqukethe yonke ilineni enikeziwe
Izivakashi eziningi zichitha isikhathi sazo esiningi emphemeni obanzi omboziwe. Ukubuka okuhle, njalo kuheleza umoya, ukubukela izinyoni nama-wallabies.
4.81 out of 5 stars from 427 reviews
4.81 · 427 okushiwo abanye
I-Finches Cottage' itholakala maphakathi nesigodi sase-Limpinwood e-NE NSW. Ukubuka okungu-360 degree kwamagugu omhlaba esohlwini lwe-Border Ranges National Park kuyamangaza nje. Kungakhathaliseki ukuthi isibhakabhaka esicwebile esiluhlaza, amafu asakazeka phezulu njengeqhwa noma imisebe yelanga ntambama kakhulu umbono oshintshayo uzongena kuwe. Hlala edekhini futhi lapha i-Finches Creek ibhibha eduze, ubhukude emanzini ayo apholile wokujabulela 'i-Natural Spa'. I-Fossick emfudlaneni eyaziwa kakhulu ngama-jaspers, i-chalcedaney nama-agate. Izinhlanzi zothingo ziningi futhi zingabonakala kalula emanzini acwebile asezintabeni nezindawo eziphuma kuzo eNational Park.
Indawo okuwukuphela kwayo esizeni, vele ujabulele ukuthula noma uhlole iziza eziningi eLimpinwood Garden Stay. Amahektha ezingadi zomdabu aphila nezinhlobonhlobo ezinkulu zezimbali, izinyoni nezilwane zasendle. Ama-Wallabies adla emadokhini azungeze leli kotishi. Ukubuka okuhle kwe-panoramic kulungele umthwebuli wezithombe obukhali.
I-Bushwalking iyatholakala kuyo yonke indawo engamahektha angama-80. Ungathatha uhambo oluya nokubuya usuka endlini encane uye emuva endaweni lapho ama-staghorn, ama-elkhorns, izidleke zamagwababa nama-orchid omdabu kwenzeka ngokwemvelo emadwaleni amakhulu ane-rhylite endaweni yethu engasemngceleni we-Limpinwood Nature Reserve.
'I-Finches Cottage' ifaneleka kahle imibhangqwana enombhede weNdlovukazi ekamelweni elikhulu. Igumbi lokulala elincane linombhede oyi-trundle ofanela izingane ezi-2 noma abantu abadala abangu-2 abengeziwe (bona isakhiwo samanani).
Izinja eziziphethe kahle nazo zamukelekile ukuthi zihlale 'e-Finches Cottage' ngohlelo oluthuthukisiwe futhi zizokujabulela kakhulu ukudlala endaweni yokucasha.
I live on the property next door where I have run an Australian Plant Nursery for nearly 40 years. I enjoy the outdoors and have interests in gardening, reading, and listening to…
Ababungazi bakho u-Sharon & Russell bayakujabulela ukuxoxa ngezidingo zakho futhi bakweluleke ngezinto ezikhangayo zasendaweni. Ngaphandle kwamahektha e-Finches Cottage unokufinyelela okugcwele endaweni yethu engu-80 acre engumakhelwane. Kukhona uhambo olubekelwe wena ngale ndawo. Indawo yethu ifaneleka kahle kuma-Mountain Bikes, imizila eminingi okufanele ilandelwe. Sibuyela e-Limpinwood Nature Reserve, esohlwini lwamaGugu Omhlaba. Wamukelekile ukuthi uvakashele indawo yethu yasenkulisa exhumene futhi ubuke i-nursery esebenzayo futhi uhlole amahektha ethu ezingadi. Kukhona i-fossicking eFinches Creek edlula endaweni, futhi lapho umfula ugeleza kahle kukhona 'i-spa yemvelo' enhle ongayijabulela. URussell naye ungumthwebuli wezithombe. USharon noRussell baphinde basebenzise i-'Rock On Designs', lapho besebenza ngokukhethekile ekuthwebuleni amatshe ayigugu ayigugu. USharon ukhiqiza ubuciko bodonga, kanye nemikhiqizo ehlukene esebenzisa lezi zithombe. Futhi sinokuphrinta okugcwele okusethiwe, futhi singaphrinta noma yiziphi izithombe zakho ngenkathi uvakashele usayizi ofika ku-42". Singaphrinta futhi kumakomishi, ama-coaster, ama- tshirt, ama-mousepad, neminye imikhiqizo esinayo esitokweni futhi. ungaphinda ukhethe ukuthi ezinye zezithombe zakho zenziwe kabusha kule mikhiqizo.Vele ukhulume noSharon ngezidingo zakho uma ubhukha.Siphinde siqoqe,sike siphinde sipholishe ama-thunderegg nama-agate futhi wamukelekile ukwenza isikhathi sokusivakashela ukuze ubone lezi.
Ababungazi bakho u-Sharon & Russell bayakujabulela ukuxoxa ngezidingo zakho futhi bakweluleke ngezinto ezikhangayo zasendaweni. Ngaphandle kwamahektha e-Finches Cottage unokufinyel…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-13316
Hlola ezinye izinketho ezise- Limpinwood namaphethelo